मुटु मात्रै होइन छाती दुख्ने कारण, कस्तो दुखाइको ख्याल गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
मुटु मात्रै होइन छाती दुख्ने कारण, कस्तो दुखाइको ख्याल गर्ने ?
छाती दुख्ने बित्तिकै हामीले मुटुमा समस्या छ कि भनेर सोच्ने गर्दछौं । कतिपय मानिसहरु बाँयातर्फ छाती दुख्दा निकै आत्तिने समेत गर्दछन् । तर छातीको भाग दुख्ने कुरा मुटुरोगसँग मात्र सम्बन्धित छैन । कतिपय अन्य कारणले समेत छाती दुख्ने गर्दछ ।
तर छातीको दुखाई निकै संवेदनशील हुने हुँदा के कारणले छातीको भागमा दुखाई भएको छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ । सोही अनुरुप उपचार गर्न सके समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । याे दुख्ने वा असहज हुनुलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैने । छाती किन दुख्छ र कस्ताे दुखाइबाट कुन राेग लाग्दा कसरी दुख्छ भन्ने जान्नै पर्ने हुन्छ ।
ट्याग्स: छाती दुख्ने